မော်ရင်ဟိုရဲ့ စပါးအသင်းက ဥရောပထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေအတွက် ကြောက်လန့်စရာဖြစ်ပြီလား ?? – Myan Ball
မော်ရင်ဟိုရဲ့ စပါးအသင်းက ဥရောပထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေအတွက် ကြောက်လန့်စရာဖြစ်ပြီလား ??
မော်ရင်ဟို ရောက်လာတာနဲ့အတူ တချို့ပွဲတွေမှာ သူက ကစားသမားတွေအတွက် အပို အင်အားဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ ……
ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ဘိုနူချီက ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက် (၁၆) သင်းအဆင့် ပြိုင်ပွဲမှာ မော်ရင်ဟိုရဲ့ စပါးအသင်းနဲ့ ထိပ်တိုက်မတွေ့ချင်ဘူးလို့ ဖွင့်ဟ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းဟာ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ် အသင်းကို ၁-၀ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိပြီးနောက် အုပ်စု ပထမ နေရာနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်ရောက်ဖို့ သေချာခဲ့ပြီး စပါးအသင်းကလည်း အိုလံပီယာကော့စ်အသင်းကို ၄-၂ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိပြီးနောက် အုပ်စု ဒုတိယနေရာနဲ့ ရှုံးထွက် (၁၆) သင်းအဆင့်ကို တက်ရောက်ဖို့ သေချာခဲ့ပါပြီ။
အုပ်စု ပထမနဲ့ အုပ်စု ဒုတိယနေရာ နှစ်သင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက် (၁၆) သင်းအဆင့်မှာ (၂၀၁၈) ခုနှစ်ကလည်း ဒီနှစ်သင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ဖူးတာပါ။ လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူက နောက်တစ်ဆင့် နဲ့ ပတ်သက်လို့ “ကျွန်တော်တို့ စပါးအသင်းကို ရှောင်ချင်ပါတယ်။ မော်ရင်ဟို ရောက်လာတာနဲ့အတူ တချို့ပွဲတွေမှာ သူက ကစားသမားတွေအတွက် အပို အင်အားဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဖေဖော်ဝါရီနဲ့မတ်လ ရောက်ဖို့က အဝေးကြီး လိုပါသေးတယ်။”
“ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင် မော်ရင်ဟိုက သူ့အသင်းသားတွေရဲ့ အကောင်းဆုံး ပုံစံတွေကို ဘယ်လိုဆွဲထုတ်ရမလဲ သိပြီးသားပါ။” ဆိုပြီး ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသင်းရဲ့ တွဲဖက် နောက်ခံလူ ဒီလစ်ဂ်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဘိုနူချီက “နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ ဒီလစ်ဂ်က အမြဲတမ်းလိုလို တိုးတက်နေပြီး ထိပ်တန်း ကစားသမားတွေရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးပါ။ သူက သူ့ကိုယ်သူလည်း နှိမ့်ချဆက်ဆံတတ်ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နောက်ခံလူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။” ဆိုပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ အချိန်မှာ ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းရဲ့ အဓိက ပြည်တွင်းပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ နောက်ဆုံး အချိန်အထိ ရုန်းကန်ရတော့မှာဖြစ်ပြီး ဒီလိုမျိုး အင်တာမီလန် အသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘိုနူချီက “ကွန်တီရောက်လာတာကြောင့် အင်တာမီလန်တို့ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံး နေရာအတွက်ရော၊ ချန်ပီယံလိဂ် အတွက်ပါ တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တော့မယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်အသင်းအကြောင်းကိုပဲ စဉ်းစားပြီး ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ နောက်ဆုံး အချိန်ထိ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ ဆုဖလားတွေ ကိုင်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲ စဉ်းစားထားပါတယ်။” လို့ ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
ကျွန်တော့်အနာဂတ်က ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ လက်ထဲမှာပဲ ရှိပါတယ် – ဝီလီယံ